I-China Pressure swing adsorption umshini wokukhiqiza i-nitrogen Manufacture and Factory |UJuxian
Umshini wokukhiqiza i-nitrogen we-pressure swing
Imishini yokwenza i-nitrogen isetshenziswa kabanzi ku-electronics, ukudla, i-metallurgy, amandla kagesi, amakhemikhali, i-petroleum, imithi, izindwangu, ugwayi, i-instrumentation, ukulawula okuzenzakalelayo nezinye izimboni, njengegesi eluhlaza, igesi yokuvikela, igesi eshintshwayo kanye negesi yokuvala.
I-pressure swing adsorption nitrogen sieve ukusetshenziswa kwe-carbon molecular sieve njenge-adsorbent, kusetshenziswa isimiso sokukhangisa se-pressure swing ukuze kutholwe imishini ye-nitrogen.Ngaphansi Kokucindezela okuthile, ukusetshenziswa komoyampilo emoyeni, i-nitrogen ku-carbon molecular sieve adsorption ebusweni bomehluko. , okuyi-carbon molecular sieve ekusakazeni kwe-oksijini adsorption kune-nitrogen, ngokulawula okuhlelekayo kokuvula nokuvala ivalvu yomoya, omunye umjikelezo, ukuzuza u-A, B ukukhangisa kwemibhoshongo emibili kanye nenqubo yokuhlubula i-vacuum, ukuhlukaniswa okuphelele komoya-mpilo ne-nitrogen, thola ukuhlanzeka okuphezulu. initrogen.
1. Amathuluzi anokwakheka okuhlangene, okuhlanganisiwe okugibele i-skid, indawo encane, ingqalasizinda kanye nokutshalwa kwezimali okuncane.
2. Kulula ukuqala nokumisa, ngokushesha ukuqala nokukhiqiza igesi.
3. Okuhle kakhulu, umsindo ophansi, akukho ukungcola, ukusebenza kokuzamazama komhlaba okuqinile.
4. Inqubo elula, imikhiqizo evuthiwe, ukuhlukaniswa kwe-adsorption kwenziwa ekamelweni lokushisa, ukusebenza okuthembekile, izinga eliphansi lokuhluleka, ukugcinwa okulula, izindleko eziphansi.
Isondlo sangemuva kokuthengisa
1. Ishifu ngayinye njalo hlola ukuthi i-exhaust muffler ithululwa ngokujwayelekile.
3. hlanza uthuli nokungcola ebusweni bezinto zokusebenza.
4. Hlola umfutho we-inlet, izinga lokushisa, indawo yamazolo, izinga lokugeleza kanye nokuqukethwe kwamafutha komoya ocindezelwe njalo nevamile.
1. Amapayipi e-PU, ama-gauge okucindezela, ama-valve amabhola e-blowdown, ama-valve okunciphisa ingcindezi kanye nama-solenoid valve kufanele ashintshwe ngokuya ngendawo yawo yokusebenza kanye nokusetshenziswa kwangempela.Lapho amapayipi e-PU, ama-gauge okucindezela, ama-valve ebhola e-blowdown, ama-valve okunciphisa ingcindezi nama-solenoid valve ephukile, egugile noma evinjiwe, kufanele ashintshwe ngesikhathi.
2 isisefo samangqamuzana, ukushintshwa kwekhabhoni ecushiwe kufanele kuncike kumthamo wayo wokukhangisa kanye nesikhathi sokusebenzisa, ngemuva kokuphila kwesisefo samangqamuzana, kukhona impushana eyengeziwe ekuphumeni kombhoshongo we-adsorption, kanye nomthamo we-nitrogen, umthamo osebenzayo we-adsorption kufanele ucatshangelwe lapho kufakwa esikhundleni. .Ukumiselela, akufanele kuphela kumiselele ingxenye yokumiselela, kodwa konke ukumiselela, ukuze kungathinti umphumela wokukhangisa.
3.Ukushintshwa kwesici sokuhlunga kufanele kuncike emehlukweni wengcindezi ngaphambi nangemuva kwesihlungi kanye nesikhathi sokusebenzisa.Lapho ukushintshwa, akufanele kuthathe indawo kuphela ingxenye yalo, kodwa konke, ukuze kungathinti umphumela wokukhipha amafutha.
Lapho ushintsha izesekeli, khetha izesekeli ezinikezwe inkampani yethu, ngoba izesekeli ezinikezwe inkampani yethu kuphela ezingaqinisekisa ukufakwa nokusebenza kokusebenza kwezinsiza zemishini.
Okwedlule: Uhlobo lwe-JXY isomisi sokuvuselela ukushisa kwemfucuza
Olandelayo: I-JXO pressure swing adsorption air separation imishini yokukhiqiza umoya-mpilo